Baolina kitra - CAN 2019 :: Miaina zava-baovao hatrany ny Barean’i Madagasikara • AoRaha
Baolina kitra – CAN 2019 Miaina zava-baovao hatrany ny Barean’i Madagasikara
Maromaro ireo zava-baovao iainan’ny eki­pam-pirenena malagasy, taranja baolina kitra, na ny Barean’i Madagasikara any Ejipta, mandritra ny fiadiana ny amboaran’i Afrika na ny CAN 2019.
“Hiasa ny VAR”
Taorian’ny naha ekipa sambany niatrika ny fifaninanana, nitana ny laharana voalohany tao amin’ny vondrona nisy azy, dia vahinin’ ny dingan’ny ampahavalon-dalana sy ny ampahefa-dalana indray ny ekipan’i Nicolas Dupuis. Ankoatra izany, dia hiatrika ny lalao hampiasana ireny fitaovam-pitsarana amin’ ny alalan’ny sarimihetsika (VAR) ihany koa izy ireo. Sambany no hotsa­raina amin’io fitaovana io ny lalaon’izy ireo. Araka ny fitsi­pika napetraka tany am-piandohan’ny CAN dia ma­nomboka eo amin’ny dingan’ny ampahefa-dalana no hampiasana ny VAR amin’ity andiany faha-32 amin’ny CAN ity.
Maromaro ireo fahadi­soan’ny fitsarana nandalovan’ ny Barean’i Madagasi­kara, tamin’ireo lalao efatra efa vitany. Isan’ireny ny nitranga tamin’ny alahady lasa teo, izay nanosehan’i Thomas Fontaine ny mpanafika kongoley tao amin’ny faritra tsy azo ivalozana. Manomboka eto dia mila mitandrina ireo mpilalao malagasy satria azo atao tsara ny mijery izany amin’ny VAR, raha misy ny fahadisoan’ny fitsarana ataon’ny mpitsara.
Isan’ireo zava-baovao niainan’ny Barea ihany koa, ary hipetraka ao amin’ny tantaran’ny baolina kitra malagasy, ny fandresena an’ireo ekipa goavana na dia isika aza no zandriny indrin­dra eo amin’ny filaharana na­voa­kan’ny Federasiona iraisam-pirenena (Fifa) tamin’ny fiandohan’ny volana jona lasa teo. Hisy fiantraikany amin’io filaharana io no nandre­sen­tsika an’i Nizeria sy RD Congo, amin’ny volana aogositra, no hiovan’izany.
Sambany ihany koa no nilalao tany ivelan’i Madaga­sikara teo imason’ireo mpa­nohana avy eto an-toerana maro ny ekipam-pirenena malagasy. Saika ireo mpila ravinahitra no mijery sy mano­hana azy ireo amin’ireny lalao ireny. Amin’ny dingan’ ny ampahefa-dalana dia tombanana ho maromaro kokoa noho ireny ny isan’ireo Malagasy hanohana azy ireo.
Fanindroany kosa no hilalao amin’ny alina ny Barean’i Madagasikara, amin’ny CAN 2019. Nosantarina tamin’ny fifandonantsika sy Guinée izany, tamin’ny 22 jona lasa teo. Isan’ny mahatsara ny milalao amin’ny alina ny fahamaiva­nan’ny hafanana.
Filana ravin’ahitra :: Mahazo vahana indray ny fandefasana mpiasa an-tsokosoko any ivelany
Finoana katolika eto Madagasikara :: Voatendry ho Eveka mpanampy ny mompera Andriantsoavina